Kubatsirwa Kunoitwa Vana Kana Vakaita Zvinhu Zvinoita Kuti Vashandise Pfungwa | Mazano Ekubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bassa (Cameroon) Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hungarian Iban Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mashi Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Norwegian Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Thai Turkish Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese Welsh Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kubatsirwa Kunoitwa Vana Kana Vakaita Zvinhu Zvinoita Kuti Vashandise Pfungwa
Zvinhu zvinoita kuti vana vashandise pfungwa dzavo ndezviya zvinoita kuti vade kuziva zvakawanda, uye vakwanise kufungidzira zvinhu zvakasiyana-siyana, izvo zvinovabatsira kuti vakure mupfungwa uye vadzidze kuita mabasa emaoko.
Zvinhu izvi zvinosanganisira:
Kutamba nezvinhu zvisingashamisiri (kunyange bhokisi risina chinhu chairo rinogona kubatsira mwana kufungidzira zvinhu zvakasiyana-siyana)
Munyika dzakawanda, pane kuti vana vaite zvinhu izvi vava kuswera vachiona TV kana kuti vachiita zvinhu zvavanenge varongerwa nevamwe vanhu.
Unofanira kunetseka here kuti mwana wako ari kuswera achiitei?
Kuita zvinhu zvinobatsira vana kuti vashandise pfungwa dzavo kunovabatsira kuti vakure zvakanaka. Kunoita kuti vave neutano hwakanaka, vagone kuita zvimwe zvinhu vega, uye vagone kuwirirana nevamwe zvakanaka. Kunogonawo kudzidzisa vana kuti vave nemwoyo murefu, vagone kuita zvisarudzo zvakanaka, vazvidzore, uye vagone kutamba nevamwe zvakanaka. Saka kuita zvinhu zvinobatsira vana kuti vashandise pfungwa kunoita kuti vakure vari vanhu kwavo.
Kunyanya kuvaraidzwa neTV kana foni kunogona kukuvadza. Vana vanogona kupindwa muropa nekuvaraidzwa nezvinhu izvi uye zvinonzi zvinogona kukonzera kuti vana vave nemiviri yakakurisa isingaenderani nezera ravo uye vave nehasha. Iyi iyambiro kuvabereki vanoshandisa zvinhu izvi kuti zvivaraidze vana vavo vasati vava kuenda kuchikoro.
Kurongera vana zvekuita kune zvakwakaipira. Kana vabereki vakarongera vana vavo zvinhu zvakawanda zvekuita, vana havazowani nguva yekungotambawo vega vachiita zvinhu zvinovabatsira kuti vade kuziva zvakawanda uye vadzidze kuita zvimwe zvinhu. Asi zvinokosha chaizvo kuti vana vawane nguva yekuita zvinhu izvozvo.
Itai kuti vana vawane nguva yekuita zvinhu zvinoita kuti vashandise pfungwa dzavo. Kana zvichiita, regai vana venyu vachimbotambawo panze vachionawo zvinhu zvakasikwa. Vapei nguva yekuita zvinhu zvavanofarira uye yekutamba nezvinhu zvinoita kuti vafunge. *
Zvekufunga nezvazvo: Zvinhu zvinoita kuti mwana wangu ashandise pfungwa dzake zvinogona kumubatsira kuti ave neunhu hwakaita sei uye agone kuita zvinhu zvipi? Zvinhu izvi zvingamubatsirawo sei muupenyu?
Itai kuti mwana wenyu asanyanya kuita nguva yakawanda achiona TV. Nyatsofungisisai musati mabvumira kuti mwana wenyu agare achivaraidzwa nezvinhu zvaanoona paTV kana pafoni. Vanachiremba vevana vanokurudzira kuti vana vasati vasvitsa makore maviri, havafaniri kushandisa zvinhu zvakadai semafoni kana kuona TV uye kuti vana vane makore maviri kusvika pamashanu havafaniri kudarika awa imwe chete vachiona zvinhu izvi kana kuzvishandisa. *
Zvekufunga nezvazvo: Ndingabvumira mwana wangu kushandisa foni kana kuti kuona TV kwenguva yakareba sei? Ndinofanira kuona pamwe chete naye here? Zvii zvimwe zvingavaraidza mwana wangu pane kuona TV kana kuti kushandisa foni?
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Rambai makanyatsongwarira kuti musafamba sevanhu vasina kuchenjera asi sevanhu vakachenjera, muchishandisa nguva yenyu nekuchenjera.”—VaEfeso 5:15, 16.
Nyatsofungisisai panyaya yemapurogiramu anorongerwa vana kuti vaite. Mapurogiramu anenge akarongerwa vana anogona kubatsira mwana wenyu kuti agone kuita chimwe chinhu kana kuti kutamba mumwe mutambo. Asi kakawanda kacho, kana akawandisa anoita kuti mwana pamwe chete nemubereki, uyo anenge achifanira kuendesa mwana kumapurogiramu iwayo, vawandirwe nezvekuita. Zano riri pana VaEfeso 5:15, 16 rekushandisa nguva nekuchenjera rinoshandawo panyaya iyi.
Zvekufunga nezvazvo: Vana vangu ndakavarongera zvinhu zvakawandisa zvekuita here? Kana zvakadaro, ndepapi patingagadzirisa?
^ ndima 16 Zvinhu zvekutambisa zvakawanda zvinotengeswa muzvitoro hazvikurudziri vana kuti vashandise pfungwa dzavo. Asi zvinhu zvekutambisa zvisingashamisiri zvakadai sezvimiti, mabhokisi, kana mapepa zvinobatsira mwana kuti ashandise pfungwa dzake.
^ ndima 19 “Nguva inoita mwana achiona TV kana kushandisa foni,” iri kureva nguva inopedzerwa pakuvaraidzwa nezvinhu zvisingasanganisiri kukurukura nehama neshamwari kana kuti kuona mapurogiramu ekunamata pamwe chete semhuri.
Kudzokorora: Mungabatsira sei mwana wenyu kuti atambe nezvinhu zvinomubatsira?
Itai kuti ave nemukana wekuita zvinhu zvinomubatsira kuti ashandise pfungwa dzake. Itai kuti vana venyu vatambe nezvinhu zvinoita kuti vafunge.
Itai kuti mwana wenyu asanyanya kuita nguva yakawanda achiona TV. Nyatsofungisisai musati mabvumira kuti mwana wenyu asati ava kuenda kuchikoro avaraidzwe nefoni kana kuti TV.
Nyatsofungisisai panyaya yemapurogiramu anorongerwa vana kuti vaite. Kana mapurogiramu aya akawandisa anogona kuita kuti vana nevabereki vawandirwe nezvekuita.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kubatsirwa Kunoitwa Vana Kana Vakaita Zvinhu Zvinoita Kuti Vashandise Pfungwa
ijwhf nyaya 19